DEG DEG: Mid kamid ah Madaxweyne kuxigeenadii Xidig oo ku dhawaaqay in uu ka tanaasulay.
KISMAAYO(P-TIMES) – Cabdulqaadir Cabdi Shareeye oo kamid ahaa garabka mucaaradka ee uu hogaamiyo Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, gaar ahaana Madaxweyne kuxigeen ugu magacownaa ayaa ku dhawaaqay in uu ka tanaasulay xilkaas.
Mr, Shareeye ayaa sheegay in uu sidan u sameeyey si horey loogu dhaqaajiyo Jubbaland, wuxuuna cadeeyey in talaabo kasta oo geedi socodka ah uu taageersan yahay.
“Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Shareeye waxaan ahaa Garabka Mucaaradka Jubbaland gaar ahaan ku xigeenka Cabdirashiid Xidig waxaana u tanaasulay danta Jubbaland waxaana garab taagnahay Madaxweynaha dadka ree Jubbaland ay doorteen Axmed Maxamed Islaam” sidaas waxaa yiri Cabdiqaadir Cabdi Shareeye.
Madaxweyne kuxigeenkii Xidig ayaa sheegay in wixii ay qabanayeen ujeedadoodu ahayd in Jubbaland horey loo dhaqaajiyo, taasna uu go`aansaday in uu kala shaqeeyo Madaxweynaha sharciga ah ee Jubbaland Axmed Madoobe.
Xidig oo Digniin adag soo saaray, shaaciyeyna in naftiisu halis ku jirto.
Tanaasulka kuxigeenkii Xidig ee Jubbaland, ayaa ku soo beegmaysa saacad ka dib markii Xildhibaan Cabdirashiid Xidig walaac ka muujiyey amniga naftiisa iyo qaar kamid ah saxiibadiisa oo uu sheegay in la shirqoolayo.